Kwenzekani oLwandle iMedithera? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El Ulwandle iMedithera bekulokhu kusengozini kakhulu. Ngokungafani nabanye, njengoLwandle lweCaribbean ngokwesibonelo, ludliswa uLwandle i-Atlantic oludabula umfula, waseGibraltar, ongaba amakhilomitha angama-20. Ukube belingavalwa, into esevele yenzeke eminyakeni eyizigidi eziyisithupha eyedlule, lolu lwandle beluyoyeka ukuba khona. Kuyiqiniso ukuthi njengamanje akunakwenzeka ukuthi lokho kuphinde kwenzeke, kepha iqiniso ukuthi akuyona ngaphandle kwezinkinga zayo.
Umbiko owenziwe ngaphakathi kohlaka lweNational Plan for Adaptation to Climate Change, olukhuthazwa nguMnyango wezoLimo nezeMvelo, uveza imiphumela eseyivele ibonwe kule ngxenye yomhlaba, kanye nemiphumela yayo emifushane naphakathi. isikhathi.
1 Iziphi izinguquko ezenzekayo oLwandle iMedithera?
2 Yini okulindeleke ukuthi yenzeke eminyakeni embalwa ezayo?
Iziphi izinguquko ezenzekayo oLwandle iMedithera?
Lolu lwandle luqala ukwehluka kunalolo ebesilwazi kuze kube manje. Izici zayo zishintsha kakhulu. Ngokwalo mbiko, okungahambi kahle okwenzekayo yile:
Izinga lokushisa komhlaba liyanda phakathi 0,2ºC kanye no-0,7ºC ngeminyaka eyishumi. Kwezinye izindawo, njengeColumbretes Islands Marine Reserve, ukukhuphuka kuphakeme: 0,04ºC.
Izinga lolwandle likhuphuka phakathi 2 no-10 mm ngonyaka.
Nciphisa ubude begagasi (-0,08cm / ngonyaka), okungadalwa kakhulu amagagasi aphansi ebusika.
Ukufa kwabantu abaningi. Ngesikhathi sasehlobo esishisayo, njengo-2003, lapho ezifundeni eziningi amazinga okushisa olwandle ayengu-1ºC noma ngaphezulu, izilwane zasolwandle zinenkinga enzima ngempela; empeleni, inani lamakhorali lohlobo C. caespitosa, elihlala eziqhingini zaseColumbretes, lehla phakathi kuka-50 no-80% phakathi kuka-2003 no-2012.
Ukubukeka kwezinhlobo ezingezona ezomdabu, njenge-algae ebomvu, imvelaphi yayo iseLwandlekazi lwaseNdiya kepha efinyelele eMedithera ngeSuez Canal. Kodwa kukhona ezinye, njengezifudu ezinamaqabunga abomvu noma i-lionfish (okuyinto, ngasendleleni, ineziqu ezinobuthi).
I-jellyfish izokwanda. Lezi zilwane ziyingxenye yehlobo laseMedithera, kepha njengoba ulwandle lufudumala, ziyavela ngaphambi kokuthi kuqale leyo nkathi. Ngo-2016, zabonakala ngenyanga ka-Ephreli.
Yini okulindeleke ukuthi yenzeke eminyakeni embalwa ezayo?
Uma konke kuqhubeka ngokufana, izinga lokushisa lolwandle elizungeze iNhlonhlo yase-Iberia lingakhuphuka phakathi 2,5º kanye no-3ºC kusukela manje kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka. Ngokuqondene nolwandle, kungakhuphuka kuzungeze i- 40 no-60cm njengoba nosawoti wanda ku-10m wokuqala.
Futhi, kulindeleke ukuthi i-asidi. Futhi lokhu kuzoba usongo olukhulu kuwo womabili amakhorali nezinye izilwane, njengemikhomo, ngoba ukudla kwazo okuyinhloko, i-krill, kuzoncishiswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Kwenzekani oLwandle iMedithera?
'' Ukufa kwasebusika '' kwazisa umphakathi wesayensi